Bacikwe 'ukuphupha' kweChiefs bamashela eNaturena abalandeli - Impempe
Bacikwe ‘ukuphupha’ kweChiefs bamashela eNaturena abalandeli
Abalandeli beKaizer Chiefs abebemasha
Bakhala ngokuthi liya ngokuphupha bebhekile iqembu abalithanda ngezinhliziyo zabo zonke abalandeli beKaizer Chiefs abamashele ekomkhulu laleli qembu eNaturena ngoLwesihlanu.
Le mashi – eqale kwangathi amancoko nje asezinkundleni zokuxhumana – igcine yenzeke ngampela njengoba inqwaba yabalandeli behlangane ngaphandle kwamahhovisi eChiefs eNaturena bezokwethula izikhalazo zabo kubaphathi.
Okuhlale obala wukuthi abayizwa eyokuthi iqembu labo libukeke selifana namanye, lingasakhonyi njengakudala. Kuzokhumbuleka ukuthi isidonsela kweyisikhombisa iminyaka Amakhosi engasayazi indebe.
“Sifuna ukubona iKazier Chiefs iba ngcono ukusuka manje,” kusho omunye wabalandeli abebehambele le mashi. “Sikhathele ukubona iKaizer Chiefs iphenduka iqenjana nje engathi idlala kwiGladAfrica Championship – angiqonde khona ukweya amaqembu adlala kulesi sigaba, siyazi ayazama ukwenyuka.
“Kodwa leli yiqembu elikhulu… Kwenzeka kanjani ukuthi iqembu elikhulu kangaka lihlulwe yiqembu lesigaba esingaphansi qede kuthuleke nje engathi akwenzekanga lutho? Sikhathele. Sifuna ukubona umehluko, asilwi namuntu,” kuqhuba lo mlandeli.
Omunye uthe kuyihlazo ukuthi iChiefs selokhu yagcina ngo-2015 ukuwina isicoco seligi kusaphethe uStuart Baxter. “Kumanje iqembu libhekene nokuqeda isizini yesithupha ingawinanga lutho, futhi kungenzeka iqede ngaphandle kweTop 8. Lokhu kuyihlazo eqenjini elinesigqi njengeKaizer Chiefs,” kusho yena.
Kuphume izikhulu zeChiefs ziholwa nguJessica Motaung obekhashwe ngudadewabo uKemiso nomfowabo uKaizer Junior ukuzolalela izikhalazo. Babe sebezithatha bathembisa ukuthi zizodluliselwa ebhodini eyengamele iqembu.
“Siyacela kulabo abalapha, nalabo abangekho lapha ukuba bame neqembu, bakhumbule konke esesikuzuzile. Asiqhubekeni nokuthembeka nokubumbana sesekane kukubi noma kukuhle,” kusho uJessica esekhuluma nabalandeli.
“Sizozithatha izikhalazo zenu sizibeke etafuleni labaphathi, siqinisekise ukuthi ziyalalelwa. Kodwa sengiphetha nje, nginesicelo kini enilapha – kulabo abalalelayo – asithathe umzuzwana siphakamise izandla senze uphawu lwethu bese sithi ‘Amakhosi for life’,” kuphetha uMotaung kwabe sekukhala amavuvuzela, kwashaywa namakhwela kwaqhuma nengoma.
Previous Previous post: Uyifunde ezinkundleni zokuxhumana iSimba abazodlala nayo oweChiefs
Next Next post: Uthole usizo umqeqeshi ophila nokukhubazeka